Droom အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
2.47.9 for Android
3.0 | 5,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（42.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Droom: Buy Used Cars & Bikes
အကယ်. သင်သည်အသစ်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောယာဉ်အသစ်များကို0ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ကြိုးစားနေပါက Droom သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။ Droom app သည်သင့်အားကားအသစ်များ, စက်ဘီးအသစ်များ, စကူတာများ, ကားအသစ်များ, ကားအသစ်များ, အသုံးပြုသောကားများ, လူကြိုက်များသောကားများ, လူကြိုက်များသောကားများ, လာမည့်ကားများ, Droom သည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှမပါ0င်သောအရာအားလုံးနှင့်ဘီးပေါ်တွင်ရှိသောအရာအားလုံးကိုကိုင်တွယ်သောအွန်လိုင်းမော်တော်ကားဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးများ, ဆိုင်ကယ်များနှင့်စက်ဘီးများမှကားများ, ထရပ်ကားများ, ထရပ်ကားများနှင့်လေယာဉ်များမှစတင်ခြင်း,
Droom သည် AI နှင့် Data Sciencriends Online အရောင်းအ0ယ်လုပ်ငန်းသုံးလက်ရှိအရက်ဆိုင်အရောင်းအ0ယ်အစီအစဉ်များဖြစ်သည်။ Droom သည်စျေးကွက်ပုံစံ4ခုရှိသည်။ IE B2C, C2C, C2B နှင့် B2B တို့တွင်စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုနှင့်လေလံပွဲ (
Droom app ကိုကူညီနိုင်မည်နည်း သူ / သူမ၏အိပ်မက်ယာဉ်များကိုအလွယ်တကူတွေ့ရန်0ယ်သူသည်သူ / သူမ၏ကားကိုချက်ချင်းရောင်းချရန်ရောင်းသူနှင့်ရောင်းသူတစ် ဦး ကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်း၏ဂေဟစနစ်0န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Broom သည်0ယ်ယူသူများနှင့်ရောင်းသူများကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကူညီသည်။
1 ။ လိမ္မော်ရောင်စာအုပ်တန်ဖိုး (သို့) One ၏အကူအညီဖြင့်ကားများ၏မှန်ကန်သောတန်ဖိုးကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသောမော်တော်ယာဉ်၏မျှတသောမော်တော်ယာဉ်၏မျှတသောစျေးကွက်ဈေးနှုန်းကိုအလွယ်တကူတွက်ချက်နိုင်သည်။
2 ။ Eco နှင့်အတူသင်သည်အသုံးပြုသောမော်တော်ယာဉ်၏အချိန်နှင့်တပြေးညီအခြေအနေကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
3 ။ သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၏အကူအညီဖြင့်အသုံးပြုသောမော်တော်ယာဉ်၏အသေးစိတ်သမိုင်းကြောင်းအစီရင်ခံစာကိုစစ်ဆေးပြီးရှာဖွေနိုင်သည်။
4 ။ Doom Discovery နှင့်အတူ, သင်စျေးကွက်ရှိလွှတ်တင်အသစ်များ၏နောက်ဆုံးထုတ်အသစ်များ၏နောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံး၏နောက်ဆုံးထုတ်အသစ်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
5 ။ doom အလျင်ဖြင့်သင်၏နောက်ဆုံးမိုင်နှင့်အိမ်တွင်ထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင်ထိုင်ခြင်းဖြင့်ချေးငွေနှင့်အာမခံအကူအညီရနိုင်သည်။
Right One - Droom app သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, စျေးနှုန်းများ, မျိုးကွဲများနှင့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များစွာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှုရန်ကူညီသည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီသည်။ Burbr>
အသုံးပြုသောယာဉ်အသစ်များ - Doom app 1 MN Active Listings ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ Delhi, မွန်ဘိုင်း, ကိုးရပူ, ဟီဒူ, ဘန်ဂ0ဒို, ဘန်ဂလို, ဂရဂရက်, ဂေရိယ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြည့်တင်းမှုအားလုံးကိုစျေးကွက်သို့ရှာဖွေနိုင်သည်။
သင်၏အိပ်မက်ကိုရယူပါ။ သင်၏အိပ်မက်ကားကိုရယူပါ။ Droom သည် RMB - လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်ယာဉ်များ0ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်သည် နှင့်ဝယ်။ သင်၏လိုအပ်ချက်ကို Doom app မှတစ်ဆင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆက်သွယ်. သင်၏လိုအပ်ချက်အရအချိန်အတိအကျကိုရနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကမင်းရဲ့အိပ်မက်ကိုမော်တော်ယာဉ်ကို0ယ်ပြီးအိမ်ကိုမောင်းနိုင်တယ်။
သင့်ရဲ့ယာဉ်ကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သင့်ရဲ့ကားကိုအလွယ်တကူစာရင်းပြုစုနိုင်တယ်,0ယ်ယူသူ5သန်းမှစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကို flash ထဲကိုရောင်းပါ။
ရောင်းသူလိုလားသူတစ် ဦး သည်တစ်ပြားမှပင်ရောင်းသူဖြစ်လိုသောကြောင့်သင်လိုချင်သောလူအများအပြားကိုရောင်းနိုင်သည်။
သည်အသုံးဝင်သောကားများ၏မျှတသောစျေးကွက်ပေါက်စျေးကွက်ကိုအကဲဖြတ်ပါ - အသုံးပြုသောကားတစ်စီးကိုမ0ယ်ခင်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသောစက်ဘီးကိုရောင်းခြင်းမပြုမီသင်သွင်းအားစုအနည်းငယ်ပေးခြင်းဖြင့်ယာဉ်၏မျှတသောစျေးကွက်စျေးနှုန်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
စစ်ဆေးပါ အသုံးပြုသောမော်တော်ယာဉ်အခြေအနေ - ဒိန်းမတ်အက်ပ်နှင့်အတူမည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆိုစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ကား၏အချိန်နှင့်တပြေးညီအခြေအနေကိုသင်သိနိုင်သည်။
အိမ်တံခါးဝမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရယူပါ။ Dobot app ဖြင့်သင်စစ်ဆေးနိုင်သည်, ရှာဖွေရန်, uy နှင့်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုတစ်အိမ်တည်းတွင်ပို့သည်။
နောက်ဆုံးယာဉ်သတင်းများ, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းချက်များ - ကျွမ်းကျင်သူများကနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Doom တွင်နာရီ, နေ့စဉ်, အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသင်ရနိုင်သည်။
အချက်များ Droom app ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဒုံးကျည် app ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
2 ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော
3 ။ စစ်မှန်
5 ။ 6
7 ။ အာမခံခြင်း
Droom - Buy and Sell Vehicles 2.47.5
Droom - Buy and Sell Vehicles 2.47.3